कोरोनाविरुद्ध खोप बनाउने ‘रेस’मा चीन के गर्दै छ?:: Naya Nepal
कोरोनाविरुद्ध खोप बनाउने ‘रेस’मा चीन के गर्दै छ?
एजेन्सी। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप बनाउन द्रुत गतिमा अघि बढ्दै छ। अमेरिकामा पनि यसका लागि अनुसन्धान अघि बढ्दै गरेता पनि विभिन्न कारणले सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। यससँगै यो ‘रेस’मा चीन भने कम्तीमा अहिलेको लागि अघि बढेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको मोडर्ना नामक खोप कम्तीमा २५ नोभेम्बरसम्म तयार भइनसक्ने बताइएको छ। परीक्षणकै क्रममा रहेको अर्को खोप एस्ट्राजेनेकाले गत महिना एक ब्रिटिस सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था झन् गम्भीर बनाएको थियो। यससँगै नोभेम्बर ३ को निर्वाचनअघि नै कोरोनाको खोप सार्वजनिक गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आशामाथि प्रहार भएको छ।
यसले चीनलाई कोरोनाविरुद्ध खोप बनाउने प्रतिस्पर्धामा अघि ल्याएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले आफ्नो देशका वैज्ञानिकहरूलाई कोरोनाको खोप बनाउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउन आह्वना गर्दै आएका छन्। यस कार्यलाई “महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य”का रूपमा लिन आह्वान भएसँगै यस निर्देशन पालनामा चिनियाँ औषधी निर्माताहरू अघि बढ्दै छन्।अन्य देशमा पनि काम अघि त बढिरहेको छ, तर चीनले महामारीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेसँगै अब उसको ध्यान यो रेसमा प्रथम हुनुमा छ।
अक्टोबरसम्ममा १० वटा कोभिड-१९ खोपको परीक्षणको तेस्रो चरणमा पुगिसकेको छ। तेस्रो चरण भनेको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण नियमकारी चरण हो, जुन चरणपछि स्वीकृति पाइन्छ। यो चरण पुगिसकेका १० मध्ये ४ वटा खोप चिनियाँ कम्पनीले बनाएका हुन्। यसमध्ये २ वटा चिनियाँ सरकारी औषधी निर्माता सिनोफार्मअन्तर्गतको चिनियाँ राष्ट्रिय बायोटेक समूहले बनाएको हो। अर्को खोप कोरोनाभाक सिनोभाक बायोटेकले बनाएको हो भने अर्को एउटा चिनियाँ सेनासँग सम्बन्धित बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र क्यानसिनो बायोलोजिक्सले संयुक्त रूपमा बनाएको हो।
चिनियाँ राष्ट्रिय बायोटेक समूहले तेस्रो चरणको परीक्षण संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, पेरु, मोरक्को र अर्जेन्टिनालगायत देशबाट ४२ हजार जनामा गर्दै छ। आगामी नोभेम्बरसम्ममा चिनियाँ नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने चीनको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले जनाएको छ।
वर्षौँ लाग्ने खोप एक वर्षभित्र
प्रायः एउटा नयाँ खोप बनाउन वर्षौँ लाग्छ। तर संसारभर १० औँ लाखको ज्यान लिइसकेको भाइरसलाई रोक्न वैज्ञानिकहरू नसोचेको गतिमा लागिपरेका छन्। चीन यही रेसमा सामान्य स्वीकृति प्रक्रियाभन्दा छिटो रूपमा लाखौँमा परीक्षण गर्न तत्पर रहेको छ। यो कार्य कहिलेकाहीँ विवादित पनि बनेको छ। चीन सरकारले आपत्कालीन कार्यक्रमअन्तर्गत मेडिकलकर्मी र बोर्डर एजेन्टजस्ता “उच्च जोखिम”मा कार्य गरिरहेकामाथि यी खोपको परीक्षण गरिरहेका छ। आपत्कालीन कार्यक्रमले पूर्ण स्वीकृतिपूर्व नै सीमित रूपमा सो खोपको प्रयोग गर्न दिएको छ।
खोप परीक्षणका चरण
कुनै पनि खोप प्रयोगका लागि उपयुक्त ठहरिन विभिन्न चरणबाट गुज्रिनुपर्छ। अनुसन्धान र विकास चरणपछि प्रि-क्लिनिकल र क्लिनिकल परीक्षणको शृङ्खला चल्छ। प्रायः प्रत्येक चरण पूरा हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ।
प्रि-क्लिनिकल — यस चरणमा खोपलाई जनावरहरूमा परीक्षण गरिन्छ। यस परीक्षणमा उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नापिन्छ।
प्रथम चरण — यस चरणमा झण्डै १० देखि ५० जनाको सानो समूहलाई खोप दिइन्छ।
दोस्रो चरण — यस चरणमा खोपलाई एकैपटक १०० जना वा बढीमा दिइन्छ। यससँगै उनीहरूको सुरक्षा, साइड इफेक्ट, प्रतिरोधात्मक क्षमता र मात्रा जाँच गरिन्छ।
तेस्रो चरण — यस चरणमा खोपलाई एकैपटक हजारौँमा परीक्षण गरिन्छ। यस परीक्षणमा यसको प्रभावकारिता र सुरक्षा जाँच गरिन्छ।
कार्यान्वयन — त्यसपछि बल्ल कार्यान्वयन चरणमा नियमकारी निकायले खोपलाई प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गर्छ। यससँगै खोपका लाइसेन्स र निर्माण चरण अघि बढ्छ।
चीन रेसमा कहाँ छ?
आपत्कालीन प्रयोगका लागि भनिएका खोप अहिले तस्रो चरणमा छ। यो फास्ट–ट्र्याकको प्रक्रियाले कति खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्नेबारे विज्ञहरू चिन्तित चाहिँ छन्। चिनियाँ स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि यसलाई एकैपटक विश्वभरका जनसङ्ख्यामा प्रयोग गर्न खतरापूर्ण हुनसक्ने बताउँछन्। तर चिनियाँ औषधी कम्पनीहरू भने यस विवाद र खतरालाई झेलेर भएता पनि यस्तो आपत्कालमा कार्यान्वयनमा लान तयार रहेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रिय बायोटेक समूहका अध्यक्ष आफैले २२ मार्चमा उक्त खोप लिएका कारण मास्क नलगाई बसेको बताउँछन्। “हामी सुरुवातकर्ता हौँ,” उनले भनेका छन्, “क्लिनिकल परीक्षणअघि हामीले पहिलोपटक ४ जनामा, दोस्रोपटक ३८ जनामा र तेस्रोपटक १३८ जनामा परीक्षण गरेका छौँ।”
उनका अनुसार साढे ३ लाखले यसरी परीक्षणस्वरूप खोप लिइसकेका छन्। त्यस्तै, सिनोफार्मले पनि आफ्ना कर्मचारी र उच्च अधिकारीमा ‘प्रि-टेस्ट’ गरिसकेको अनलाइन विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। सिनोभाकले पनि करिब ९० प्रतिशत कर्मचारी र तिनका परिवार गरी झण्डै २ देखि ३ हजारलाई खोप दिइसकेको छ। अर्कोतर्फ चीन सरकारले पनि क्यासिनो बायोलोजिक्सको कोरोनाभाइरस खोप सेनामा प्रयोग गर्न जुनमा नै स्वीकृत दिइसकेको छ। यसरी आपत्कालमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको परीक्षण कानुनसम्मत भएको र यसमा सहभागीहरू स्वयंसेवी रूपमा आएको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर प्रायः सहभागी सरकारी कम्पनीका वा सैन्य कर्मचारी भएका कारण यो कतिको स्वेच्छिक हो भन्नेमा शङ्का गर्नेहरू पनि छन्।
राष्ट्रिय गौरव र भू-राजनीति
चीनमा स्थानीय सङ्क्रमण शून्यप्रायः रहेको एक महिना हुँदा यसरी आपत्कालीन रूपमा किन परीक्षण गरियो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। यसमा कुरा आउँछ चीनको वैज्ञानिक र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको, अनि यससँगै जोडिन्छ भू-राजनीतिक लाभ। कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा व्यवस्थापनबारे चीनले प्रायः अमेरिकाबाट धेरै आलोचना खेपेको थियो। त्यसपछि चीनको “मास्क डिप्लोमेसी”अन्तर्गत कोभिड-१९ बाट भयावह परिस्थितिमा गुज्रिरहेको देशमा मेडिकल सामग्री पठाउनुले पनि चीनले कोरोनाभाइरसको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको शङ्का गरिएको थियो। कोरोनाको खोप विकास गर्ने पहिलो राष्ट्र भएमा चीनले आफ्नो विश्ववर्चस्व झन् माथि राख्न सक्छ। अमेरिकाले खालि राखेको उक्त ठाउँमा चीन आएमा उसले आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्नेछ।
यसले चीनलाई कूटनीतिक लाभ पनि दिनेछ। चीनले विशेषतः विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी भए उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ। तर चीनमा खोप बनाउने उद्योगको इतिहास त्यति राम्रो छैन। गत दशकमा चीनमा खोपको काण्डहरूको शृङ्खला नै छ।
सन् २०१८ मा चीनको च्याङसेङ बायोटेक्नोलोजी कम्पनीलाई खोप उत्पादन र परीक्षणको तथ्याङ्क गडबड गरेका कारण जरिवाना तिराइएको थियो। सन् २०१७ मा सोही कम्पनीले उत्पादन गरेका बालबालिकाका खोप गुणस्तरहीन भएको पाइएको थियो। यस्तै काण्ड, उहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्समा पनि भएको थियो।
खोपको विश्व राजनीति
अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प आफै खोप विकासको काम द्रुत बनाउन चाहन्छन्। तर प्रभावकारिता र सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी भए विज्ञ, नियमनकारी निकाय र औषधी निर्माताहरूले नै उनको यो योजनामा बाधा गर्नेछन्। चुनाव आउँदै गर्दा यस कार्यलाई झन् राजनीतिक प्रभावसहित अघि बढाउन सक्ने भन्दै अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासनले यस साता नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ। यसअनुसार खोप कतिको सुरक्षित छ भनी कम्तीमा २ महिनाको तथ्याङ्क दिइनुपर्नेछ। यससँगै अमेरिकामा नोभेम्बर ३ अघि खोप आउन असम्भव नै भएको छ। मोडर्ना कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टेफन बान्सेलले भने गत जनवरीदेखि यस खोपका प्रतिस्पर्धामा लागिपर्दा कसैको पनि दवाब नआएको स्पष्ट पारेका छन्।